Fitaovana fanakanana Auto Clay Block, Machine Machine Auto Hollow Clay Block - Bricmaker
Maherin'ny 2000 ny tsipika famokarana napetrak'i BricMaker mandraka ankehitriny na ao an-trano sy any ivelany, BricMaker dia miantoka ny tetikasan'ny mpanjifa miaraka amin'ny fiarovana ara-toekarena, fiarovana ny tontolo iainana, fitsitsiana angovo, mandeha ho azy ary fanadiovana mba hanampiana ireo orinasan'ny mpanjifanay hahazo tombony ara-toekarena lehibe kokoa ary hahatsapa lanja fiainana!
AOKA IANAO MPANJAKAN'NY Mpanao biriky
Mba hahafahanao manam-pahaizana amin'ny mpanao biriky dia mila mandinika tsara ireto zavatra 4 manaraka ireto ianao amin'ny fananganana orinasa biriky vaovao sy maoderina: Famakafakana ny fitaovam-pitaovana, famolavolana injeniera, fisafidianana fitaovana, fanaingoana ny fitantanana. Izahay BricMaker dia te-hizara aminao ny orinasan-biriky 20 taona niainanao ary hanolotra anao fitaovana tsara sy vahaolana teknolojia avo lenta kokoa, hanampiana anao hahazo tombony ara-toekarena lehibe kokoa ary hahatsapa ny lanja fiainanao manokana!
Fivondronana indroa & Fametrahana robot
Tongasoa eto BricMaker
Manamboatra fitaovana vita amin'ny biriky, manolotra fakan-kevitra amin'ny famolavolana biriky, famolavolana lafaoro & fananganana ary vahaolana famokarana mandeha ho azy.
BricMaker matihanina amin'ny famokarana fitaovana vita amin'ny tanimanga (sinteria), famolavolana R&D, lafaoro ary famolavolana biriky fiara. Ny BricMaker dia mihoatra ny 10 hektara, manana atrikasa famokarana maoderina maherin'ny 30000 metatra toradroa, miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 30 tapitrisa Dolara amerikana, ary mpiasa efa ho 200 izay ahitana teknisianina sy injeniera matihanina 90. Tao anatin'izay 10 taona lasa izay, ny BricMaker dia nanao famatsiam-bola lehibe ho an'ny fitaovana vita amin'ny tanimanga (sinter) R&D, nandray ny teknolojia famokarana mandroso sy fitaovana fampitaovana, nanome vahaolana zavamaniry biriky feno miaraka amin'ny famakafakana fitsapam-pahaizana momba ny famokarana fitaovana, famolavolana injeniera famokarana, famolavolana famolavolana lafaoro, fametahana fitaovana sy fananganana komisiona, fanofanana ara-teknika matihanina sns. Fanolorana fanampiana ara-teknika matanjaka kokoa ho an'ireo orinasa biriky maro karazana na eto an-trano sy any ivelany.
30 tapitrisa USD +
ekipa 90 +
natolotra 2000 +
BricMaker mpanamboatra fitaovana biriky, manolotra fakan-kevitra momba ny famolavolana zavamaniry biriky sy vahaolana famokarana mandeha ho azy.
Akora Rehefa mandinika
MANAGEMENT izay tokony ho
Inona ny tanjonao farany sy ny vokatrao? Inona ny naotinao farany marika marika eo amin'ny tsena? Te-hanamboatra birao / sakana avo lenta na avo lenta ve ianao eo amin'ny tsenanao? Mba hahazoana antoka hahazoana vokatra avo lenta amin'ny biriky na sakana, tsy maintsy dinihinao tsara ny fanadiovana sy ny fahanterana ny akora, ny tanjaky ny biriky / ny sakana, ny kalitaon'ny vokatra ary ny tanjany.
Fampivoarana ny refy
Miaraka amin'ny fampivoarana ny tsena, ankehitriny ny vokatra marketing miaraka amin'ny fifaninanana mafana. Tsy maintsy dinihinao tsara ny fampiasam-bolan'ny zavamaniry birika manana fahaiza-manao ambony kokoa, manitatra ny toekarena arak'asanao, amin'izay dia mitazona ny tombony amin'ny fifaninanana marketing ianao ary mitazona fivoarana tsara.
Izahay Bricmaker dia nihevitra fa ny fitantanana ny vidin'ny famokarana no hevi-dehibe amin'ny orinasa biriky rehetra. Ohatra, ny vidin'ny akora, ny vidin'ny rano sy ny herinaratra, ny sarany amin'ny tanana, ny fitazonana ny vidin'ny fitaovana, ny kojakoja fitehirizana sy ny kojakoja ilaina amin'ny milina, raha mitantana tsara an'ireo faritra vita amin'ny famokarana ireo ianao ary manao azy io ho fanarahan-dalàna bebe kokoa, miampy ny varotra tsara amin'ny vokatra vita, mino izahay fa ny zavamaniry hataonao dia hahomby ary hitazona fandidiana tsara hatrany.
Rafitra fananganana serivisy
Izahay Bricmaker dia manolotra serivisy voalamina ho anao avy amin'ny fakan-kevitra momba ny zavamaniry biriky, ny fanaovana biriky manao ny karazan-javatra manta samihafa sy ny fitsapana, ny famolavolana injeniera momba ny zavamaniry manontolo, ny fitaovana ampiasaina amin'ny tolo-kevitra, ny fitantanana ny zavamaniry farany manome torolàlana ho an'ny serivisy, ny serivisy mandritra ny varotra aorian'ny varotra, ny ampahany sy kojakoja fanampiny fanolorana fitaovana. Ny fivarotana lehibe Bricmaker dia manolotra serivisy fividianana fijanonana tokana anao ary vahaolana feno ho an'ny tetik'asa famadihana na an-trano sy any ivelany.
Mba hampihenana farafahakeliny ny vidin'ny birao fanamboarana, ny automatisation no fironana tsy azo ihodivirana amin'ny fampandrosoana zavamaniry biriky. Ny fanaovan-javamaniry tanimanga / biriky tanimanga dia nahitana ireto manaraka ireto: fampitahana akora samihafa, fampitahana rano; famahanana fitaovana sy fifehezana mandeha ho azy; rafitra biriky maitso / fanakanana-grouping-transporting-stacking system; lafaoro famolavolana, rafitra fanaraha-maso afovoany mifangaro ao afovoany; vita tamin'ny biriky tanimanga / rafitra famonosana sakana.
Tsy azonao ovaina ny fifaninanana mafana an-tsena, izay azontsika atao fotsiny dia ny manandrana mahazo ny vidin'ny famokarana ambany. Afaka nanolotra anao ny fitaovana avo lenta sy ny famolavolana zavamaniry biriky, ampitahaina amin'ny tolotra hafa na mitovy aminy, ny vokatray sy ny famolavolana amin'ny angovo 30 ~ 40%, ary ny fahombiazan'ny 130% +.